21-ka Febraayo waxaa la soo bandhigayaa Samsung Galaxy S7 cusub | Wararka IPhone
21-ka Febraayo ayaa la soo bandhigi doonaa Samsung Galaxy S7 cusub
In Actualidad iPhone waxaan inta badan ka hadalnaa adduunka Apple guud ahaan iyo gaar ahaan iPhone, laakiin waxaan kaloo ogeysiineynaa tartanka toos ah sida ku dhacda Samsung iyo shirkadaha kale ee soo saara sida LG ama Sony. Dadku kuma noola Apple oo keliya. Xanta badan ka dib, taariikhda rasmiga ah ee lagu soo bandhigayo Samsung Galaxy S7 cusub ayaa ugu dambeyntii lagu soo bandhigay fiidiyow, kaas oo noqon doona maalin ka hor Shirweynaha Caalamiga ah ee Mobile-ka ee lagu qabtay magaalada Barcelona intii u dhaxeysay 22-kii ilaa 25-kii Febraayo, 21-kii Febraayo.
Fiidiyowga, oo hogaaminaya qodobkan, waxaan arki karnaa qof oo dhigaya muraayadaha dhabta ah ee Samsung, Gear VR. Xanta ku hareeraysan labada qalab ee Galaxy S7 iyo Gear VR ayaa sheeganaya muraayadahaas waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo iyadoo lala kaashanayo taleefannada casriga ah ee shirkadda oo ku taal Kuuriyada Koonfureed. Hadda waa inaan sugno si aan u aragno nooca maaddooyinka aan ku raaxeysan karno muraayadahaan dhabta ah ee muuqaalka ah.
Gudaha Galaxy S7 maanta Ma garanayno processor-ka soo fuulaya, haddii Snapdragon 820 ama processor-ka Exynos 8890 ee shirkadda Kuuriya iyo natiijooyinka wanaagsan ee ay ku bixinayso jaangooyooyinka. Aaladda dibedda waxaan ka helaynaa aluminium jidhkiisu aad ugu egyahay moodellooyinkii hore, laakiin markan, Samsung waxay ku dartay meel loo oggol yahay isticmaalka kaararka microSD si loo ballaariyo keydinta aaladda.
Kaamiradu waxay la mid noqon doontaa ta Xperia X5, oo leh xallinta 20 megapixels oo ay weheliso labalaab hoggaan toos ah leh oo karti u leh duubista waxyaabaha ku jira 4k. Sida moodooyinkii hore, waxaan ka helnaa aaladda sawirka faraha iyo shaashadda Corning Gorilla Glass 5. Shaashadan hoosteeda waxaan ka helaynaa tiknoolajiyad la mid ah 3D Touch oo kuwii Cupertino ay ka bilaabeen iPhone 6s iyo 6s Plus cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » 21-ka Febraayo ayaa la soo bandhigi doonaa Samsung Galaxy S7 cusub
Bogagga kale waxay kaga hadlaan kamarad leh 12mpx, tayo badan, pixels ka yar. Waxaan rajeynayaa in nashqadu ay kafiican tahay oo aysan la mid aheyn sawirka kore sawirka, ma xuma, laakiin waxaan dareemayaa inay wali wax dhiman yihiin.
“Laakiin sidoo kale waxaan soo tabinaynaa tartan toos ah sida Samsung iyo shirkadaha kale ee soo saara sida LG ama Sony. Ninku kaligiis kuma noola Apple
Waxaan jeclahay taas waqti ka waqti waxaad magacawdaa tartanka kaliya kuwa xun.
Macmiilka boostada ee AirMail wuxuu soo bandhigayaa nooc iOS ah